सर्वसाधारणको लापरबाहीले कोरोना बल्झिँदै स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नभए फेरि लकडाउन
नेपालमा पछिल्लो समय देखापरेको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को युके भेरियन्टको भाइरसले विगतभन्दा बढी सङ्क्रमण फैलाइरहेको छ । यो भाइरसको भेरियन्ट भारतबाट सीमानाका हुँदै नेपाल प्रवेश गरेको हो ।
नेपालमा कोरोना दोस्रो लहरको जोखिम उच्च हुँदै जाँदा पनि सर्वसाधारणले सावधानी नअपनाएर लापरबाही गरेको पाइएको छ । यसले दोस्रो लहरको जोखिमलाई बढावा दिने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । हाल नेपालमा भइरहेको ढिलो गतिको कोरोना सङ्क्रमण परीक्षणमा पनि दैनिक एक सय ५० भन्दा बढी सङ्ख्यामा सङ्क्रमित थपिने गरिरहेका छन् । यो सङ्ख्या छिमेकी देश भारतमा दैनिक हुने गरेको ९० हजारको सङ्क्रमण सङ्ख्याको तुलनामा निकै कम भए पनि नेपालको जनसङ्ख्याको तुलनामा लगभग भारतकै अनुपातलाई पछ्याउन थाल्दै गरेको स्थिति भने हो । छिमेकी देश भारतमा बढ्दै गरेको सङ्क्रमणको जोखिमले नेपाललाई पनि सङ्क्रमणतर्फ डो¥याइरहेको छ । हाल नेपाल–भारत सीमा जोडिएका जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम उकालो लागिरहेको छ । सीमानाकामा भारतबाट फर्किइरहेका नेपालीमा नेपालका तर्फबाट गरिएको सङ्क्रमण परीक्षणमा बढी मात्रामा सङ्क्रमित भेटिइरहेका छन् । हरेक नाकामा परीक्षणको व्यवस्था हुन पनि सकिरहेको छैन । त्यसमा पनि नेपाल–भारतको सीमानाका खुला रहेकै कारण त्यहाँबाट आउजाउ गर्ने स–साना गोरेटो र वैकल्पिक बाटा निकै रहेका छन् । ती गोरेटो र वैकल्पिक बाटामा कोरोना सङ्क्रमण परीक्षणको व्यवस्था हुने त कुरै भएन । यसले गर्दा पनि नेपाल कोरोना सङ्क्रमणको दोस्रो लहरको उच्च जोखिममा परेको छ ।
नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न प्राथमिकताअनुसार खोप दिन थालिए पनि यसलाई व्यापक बनाउन सकिएको छैन । सरकारले निःशुल्क दिने भनेपछि सबै त्यसैको आशा र भरोसामा बाँचिरहेका छन् । नेपालको स्वास्थ्य बजारमा खोपले स्थान पाउन सकिरहेको छैन । पहिलो लहरसँगै त्यसको नियन्त्रणका लागि निर्माण गरिएको खोप सर्वसाधारणमा नपुग्दै दोस्रो लहरले देशलाई छोप्न थालिसकेको छ । कोरोनाको नयाँ भेरियन्टको मुकाबिला गर्ने र नियन्त्रण गर्ने खोप देशमा आवश्यक भइसकेको छ । भारतको शिराम इन्स्टिच्युटद्वारा उत्पादित स्वास्थ्य सहयोगमा आएको कोभिसिल्ड लगाइरहेका बेला छिमेकी देश चीनले पनि सहयोगस्वरूप चिनियाँ खोप नेपाललाई उपलब्ध गराइसकेको छ । कोरोना सङ्क्रमणको दोस्रो लहर व्यापक हुन नपाउँदै यो खोप आमजनताका माझमा पु¥याउन सकियो र आवश्यक थप खोप खरिद गरेरै भए पनि सर्वसाधारणबीच पु¥याउन सकियो भने उच्च रूपमा फैलँदै गरेको सङ्क्रमण समयमै रोकथाम गर्न सकिने थियो । यसतर्फ सरकारले तदारुकताका साथ कदम चाल्न सकेको छैन । अहिले ओली नेतृत्वको सरकारका मन्त्री उद्घाटन, शिलान्यास र संसद्मा सांसदको जोड–घटाउमै व्यस्त छन् । चीन सरकारबाट प्राप्त खोप काठमाडौंका तोकिएका अस्पतालमा पनि दिने व्यवस्था मिलाइएको भने पनि सरकारले सूचना प्रवाह गरेपछि धेरै मानिस यो सेवा लिन इच्छुक रहेको देखिएको छ । भारतबाट थप खोप भित्र्याउने कुरामा पनि सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन ।
पछिल्लो समयमा देशभर एकै दिनमा एक सय ७६ जनामा कोरोना सङ्क्रमण भेटिएपछि अबको अवस्था त्यति सामान्य र नियन्त्रणभित्र नरहला कि भन्ने आशङ्का बढिरहेको छ । नेपालको तीन करोडको हाराहारीमा रहेको जनसङ्ख्यामा पनि कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या दुई लाख ७८ हजारसम्म पुग्न जानु निकै चुनौतीको विषय हो । देशमा कोरोना सङ्क्रमित मृतकको सङ्ख्या तीन हजार ३२ रहेको वर्तमान सन्दर्भमा परीक्षणलाई व्यापक बनाउँदै, खोपलाई देशव्यापी अभियानको रूप दिनुका साथै क्वारेन्टाइनको पुनस्र्थापित गरिनु जरुरी हुन भएको छ । यसका साथै सर्वसाधारण जनतामा रोकथामका प्राथमिक उपायलाई पुनः स्मरण महाअभियान नै थाल्नुपर्छ । छिमेकी देश भारतको मुख्य सहर मुम्बैमा कोरोना नियन्त्रण गर्न नसकिने गरी फैलिएपछि अहिले कफ्र्यु लगाइएको छ । भाइरस सङ्क्रमण रोक्न अन्य मुख्य प्रान्तका सहरमा पनि कफ्र्यु लगाइएको छ, तर नेपालमा यस भाइरसप्रति बेवास्ता गर्ने क्रम बढेकाले पनि दिनानुदिन सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारीको भनाइ छ । हाल देखिएको भाइरसको सर्ने क्षमतालाई मानिसले नै बढावा दिइरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘जुन स्वरूपको भाइरस भए पनि सावधानी छाड्नुहुन्न थियो, तर जमघट गर्ने, मास्क नलगाउने, हिँडडुल बढी गर्न थालेकाले समस्या बढ्दै छ ।’
यो विषयले प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा प्रवेश पाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले विशेष समय लिएर जनस्वास्थ्य मापदण्ड प्रभावकारी रूपमा पालना नभए कोरोना पुनः उच्च बिन्दुमा पुग्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले आउँदो जेठ–असारमा पुनः कोरोना उच्च बिन्दुमा पुग्न सक्ने देखिएकाले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न आग्रहसमेत गरेका छन् । छिमेकी मुलुक भारतमा सङ्क्रमण उच्च गतिमा बढिरहेको भन्दै उनले सचेत रहन सबैलाई अनुरोध गरे । कोरोनाविरुद्धको खोप खरिदसम्बन्धी अध्यादेश सदनमा पेस नभएको भन्दै उनले असन्तुष्टिसमेत जनाए । मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेबाटै उल्लङ्घन भएको पनि उनको भनाइ थियो । लकडाउनमा जाने अवस्थामा नपु¥याउन पनि उनले आग्रह गरेका छन् । सदनमा जवाफका क्रममा उनले भने, ‘लकडाउनले समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने रहेछ । अर्थतन्त्र र सामाजिक जीवनमा पारेको प्रभाव यसअघिकै आउन बाँकी छ ।’
सीमानाकाबाट नेपाल भित्रिएका तीनजना नेपालीको स्वाब परीक्षणपछि युके भेरियन्टको नयाँ स्वरूप भएको कोरोना भाइरस नेपाल भित्रिएको पत्ता लागेको हो । यो करिब तीन महिनाअघि नेपाल भित्रिएको अनुमान गरिएको छ । त्यसको तीन महिनापछि कैलालीको त्रिनगर नाका हुँदै नेपाल भित्रिएका कञ्चनपुर, डोटी र डडेल्धुराका तीनजना नेपालीको परीक्षण गरिएपछि यो स्वरूपको भाइरस पत्ता लागेको हो । यसको जिन सिक्वेन्सको परीक्षणले पहिले देखिएभन्दा फरक एस जिन नेगेटिभ रहेको पाइएको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालका अनुसार नयाँ स्वरूप पत्ता लगाउन एन्टिजेन परीक्षण आवश्यक मानिन्छ । त्यस विधिबाट सीमानाका हुँदै भित्रिएका तीन हजार चार सय ७३ जनाको परीक्षण गर्दा एक सय ४३ जनामा कोरोना भएको फेला परेको थियो ।
यो स्वरूप नेपालमा देखिएलगत्तै अस्पतालले स्वास्थ्य मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायलाई कडाइ गर्न घचघच्याइरहेको छ । यो स्वरूपको कोरोना भाइरसमा सर्ने सम्भावना अति नै बढी रहेको स्वास्थ्यकर्मीले बताएका छन् । यसका सङ्क्रमितसँग अलिक नजिक रहेका करिब २५ जना मानिसलाई तीन–चार घन्टाभित्र एकैचोटि सार्न सक्ने क्षमता हुन्छ । अस्पतालले गरेको कन्ट्याक्ट ट्रयाकिङको क्रममा एउटा भोजमा गएका एक सङ्क्रमितले चार घन्टा भोज खाने स्थानमा बिताउँदा १८ जनालाई कोरोना सङ्क्रमण सारेको फेला पारिएको जानकारी अस्पतालले दिएको छ ।
← त्रिशूली अस्पतालमा मुटुको एक्सरे सेवा
हाम्रा कुरा : भारतीय र चिनियाँभन्दा नेपाली खुसी ! →